3 Supergeo news - Gofumed
3 news from Supergeo
Luulyo, 2013 tabo cusub, SuperGIS
Kuwa ka abuuray moodalka SuperGIS waxaan ka helnaa xoogaa war ah oo mudan in la badbaadiyo.
Hawlaha Guud ee Fujairah iyo Waaxaha Beeraha ayaa kor u qaadaya joogtaynta kaabayaasha ee SuperGIS
Fujairah waa mid ka mid ah Imaaraadka Carabta, Bariga Dhexe. Waxay go’aansadeen inay hirgeliyaan tikniyoolajiyadda SuperGIS ee maareynta wareegga nolosha kaabayaasha, oo ay ku jiraan maareynta hantida, qorsheynta geeddi-socodka iyo is-dhexgalka macluumaadka ee adeegsadayaasha.
Waxaa xiiso leh sida tikniyoolajiyadda CAD / GIS ay ugu sii jeedinayaan maaraynta howlaha guud ee ka baxsan maareynta macluumaadka, howlgalka. Waana in howlaha guud ay yihiin talaabo aasaasi ah oo asaasi u ah horumarka dhaqaale ee wadan; kuxiir ficilkeena dabeecadda.
Mid ka mid ah safarradayda xiga waxaan rajeynayaa inaan ka fiirsado tan, sababtoo ah waxaan qiyaasi lahaa haddii ay tahay arrinta Bentley AssetWise taas oo ku dhowdahay taas, laakiin habaynta aalad inbadan oo inaga mid ah ay had iyo jeer la xiriirto khariidado waa ... ka xiiso badan tahay. Waxay sidaas ku sameyn doonaan SuperGIS Desktop 3.1 si ay ugu adeegaan xogta, iyo sidoo kale Busolini iyo CONSTANTINI PROGETTI oo Talyaanigu ku dhammaystirayo hirgelinta SuperSurv ee maareynta nalalka waddada.
Intaa waxaa sii dheer, waa wax la yaab leh in tani ay tahay qaab dhismeedka wixii aan ku arki karnay bandhigga wadajirka ah ee u dhexeeya SuperGeo iyo GeoSystems ee Geospatial Forum ee Bariga Dhexe. Qayb xiiso leh oo ay soosaarahu iyo iibiyaha adeegyadu labadaba ku bixiyaan dalab ay labadoodaba ka faa'iideysanayaan.
SuperSurv 3.1 SuperPad 3.1atan Khariidadaha Google / OpenStreetMaps sida khariidadda asalka
Adeegsiga Aaladda Khariidadaha Khadka Tooska ah, labadan qalab waxay u oggolaanayaan khariidada dambe inay khariidad khad toos ah tahay, sida lakabka khariidadaha Google ama OSM.
Marka, markaa, haddii aan khariidad khariidad ah u sameyno annaga oo u maraya SuperGIS server 3.1, waa macquul in lagu dhigo asalka marka la qabanayo ama la casriyeeynayo khariidadaha ama xogta taariikhiga ah sida SuperSurv.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan SuperSurv 3.1, http://www.supergeotek.com/LandingPage_SS3.1.aspx
Waxaad sidoo kale ka soo dejisan kartaa qaybta bilaashka ah http://www.supergeotek.com/download6mobilada.aspx
SuperPad 3.1 waxaa lagu sii deyn doonaa rubuca sadexaad ee 201.
Daabacaadda xigta ee SuperGIS waxaa ku jiri doona luqadda Isbaanishka
Mid ka mid ah caqabadaha ugu soo jiidashada badan barnaamijkan ayaa ah ujeedkiisa ah inuu yimaado macnaha ku hadla Isbaanishka. Tan darteed, waxaan ku faraxsanahay inaan soo sheegno inay ku daraan luuqada Isbaanishka qeybtooda soo socota, sidaa darteed waxaan hubnaa in isticmaaleyaal badan iyo shirkado diyaar u yihiin inay galaan barnaamijyo awood u leh inay ku tartamaan adduunka. In kasta oo uu ku dhashay Taiwan, haddana wuxuu diyaar u yahay inuu maalgeliyo luqadeena; Maxaa mudan in la ixtiraamo.
Halkan waxaad ka arki kartaa fiidiyo dheer oo ku saabsan sida ay u shaqeyso:
Post Previous«Previous Vbookz, waa codka ugu wanaagsan ee loogu talagalay iPad / iPhone / iPod
Post Next Miyaan u isticmaali karaa sawirrada Google Earth for cadastare?Next »